အယ်(လ) ခွန်ဖန် ကို လုပ်ကြံခဲ့ သည့် ဇော်ဆိုင်း လွတ်မြောက်လာ | Freedom News Group
by FNG on September 19, 2012	KIA ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ ကွန်မန်ဒို လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း ပြန်လွတ်လာပါပြီ။
ဧရာဝတီ သတင်း မီဒီယာမှ သတင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မတိုက်ချင်လို. အိမ်မပြန်သေးဘူးဆိုတဲ. KIA ကွန်မန်ဒို
From: သတင်း ဆောင်းပါး, အင်တာဗျူး	← ကွန်ဂရက် ရွှေတံဆိပ်ဆု လက္ခံရယူ ပြီး အိုဘားမား နဲ့ဒေါ်စု တွေ့ ဆုံ
September 21, 2012	Comments are closed.